Eberechi Wike - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Eberechi Suzzette Wike (nke aha nna bu Obuzor tupu ọ lụọ di; bu onye nke amụrụ na ụbọchị iri abụọ na anọ nke Mee n'afọ 1972) bụ onye ọka ikpe nke Rivers State High Court of Justice. Ọ lụrụ onye Gọvanọ Ezenwo Wike nke Rivers State ugbu a. Ọ bụ nwanyị mbụ nke Rivers State kemgbe 29 Mee 2015.
1 Uto ya na n’ụlọ akwụkwọ ọ gara
3 Hụ kwa
Uto ya na n’ụlọ akwụkwọ ọ gara[mèzi | mèzi mkpụrụ]
Amụrụ ya dịka Eberechi Suzzette Obuzor na Odiokwu nke Ahoada West n'ime Rivers State . O sitere n’ezinụlọ ndị kwere na Kraịst nke nne na nna ya bu Dr. na Oriakụ. Obuzor. Ọ gara Mahadum Sayensị na Teknụzụ nke Rivers, ebe ọ natara LL. B. (Hons.) n’afọ 1996.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, Wike denyere aha ya nke ọma na Law School ebe ọ nwetara akara mmụta Barrister-na-Law (BL) na n’afọ 1997. Mgbe otu afọ gachara, a nabatara ya n'ụlọ ma otu ndị ọka iwu Nigeria, mechaa malite ọrụ ọka iwu na Port Harcourt, Rivers State.
Wike bụ onye natara onyinye Chevening Scholarship (UK). O nwekwara asambodo Masters na ọka iwuiwu (LL) M.) site na Mahadum Sussex . 
Wike sonyeere Efe Chambers dị ka onye ndụmọdụ Iwu na-ahụ maka ịgba akwụkwọ. E mechara họrọ ya ka ọ bụrụ onye ọka iwu majistrate. Mgbe ọ nọ na ọrụ bekee nke a, onwere ịbu Chief Magistrate Grade II, wee si ebe ahụ bụrụ onye ọka ikpe na nnukwu ụlọ ikpe na February 2012. 
Ọ bụ onye otu International Bar Association, International Federation of Women Lawyers Rivers State Branch na National na International Association of Women Judges . Ndị otu ndị ọzọ oso gụnyere Institute of Chartered Mediators na Conciliators, Chartered Institute of Arbitrators. Ma na mbụ oso ndị omebe iwu 'Association of Magistrates ngalaba nke Rivers State.
Ndepụta ndị sitere na Rivers State
Gọọmentị nke Rivers State
↑ 1.0 1.1 "Behold, brand-new first ladies!", Daily Trust, 18 April 2015. Retrieved on 30 May 2015.
Wefụtàrà ya shí https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Eberechi_Wike&oldid=68657
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 5 Ọnwaìse 2021, mgbe 10:13